Iinkampani ezintathu ezonyulwe ngeTechPoint Mira Awards! | Martech Zone
Iinkampani ezintathu endinxulumene nazo ngokusondeleyo zonyulwe njengabokugqibela Amabhaso eMira Indiana:
NgqoThagethi -Akuthandabuzeki ngokukhula kunye nobunkokeli obumnandi ukuba le nkampani iya kuba lilungelo lokufumana ibhaso. Kukho iziqwenga zenkqubo ye-ExactTarget ethi ichasane nemithetho yefiziki ngokukhawuleza ukuba bangavelisa kwaye bathumele ii-imeyile. Ndiyithandile iminyaka emi-2 nesiqingatha endiyisebenzele i-ExactTarget!
NgoMvulo, bendonwabile kukudlula ndincokole UScott Dorsey, uMongameli we-ExactTarget, kwaye yayingathi andizange ndishiye. Wayenamandla, enethemba, kwaye ehlala encumile. Into yokuba athathe ixesha lokundibona bubungqina obunje ngokuba ngumhlobo olungileyo nomcebisi.
Ngendawo yam entsha ePatronpath, ndiseza kusebenza ne-ExactTarget kancinci. Nje ukuba siphakamise ngokupheleleyo nomnye wabathengi bethu, siya kuba neakhawunti enkulu yeShishini ye-ExactTarget kwaye siyasebenza. Kule akhawunti, i-ExactTarget iphuhlise ingxelo yesiko kuthi ukuze sikwazi ukuthumela ii-imeyile egameni labameli bommandla kwaye sinike abameli ingxelo yokuba zithini iimfuno zabathengi babo ngokusekwe kunqakrazo lwabo.
Kuhle ukuba namaqabane amadala e-ExactTarget ngokunjalo, kuba bayayamkela ingxelo yam. Ukuba ngumphathi wemveliso apho kwaye ubuyele kwindima yomthengi yinto exabisekileyo. (Ndinqwenela ukuba ndikwazi ukuthenga iinketho zam ngaphambi kokuba ndizilahle!)
Sikwanayo iakhawunti yeArhente ene-ExactTarget kwaye sinamandla, umanyano oluzenzekelayo lweendawo zokutyela. Ngobusuku bonke, ngaphandle konxibelelwano kwindawo yokutyela sithumela naliphi na elinye lamaphulo alishumi - umhla wokuzalwa, isikhumbuzo, akukho nxu lumano lweentsuku ze-X, ukuthengwa okungaphezulu kweedola ze-X, njl.njl.
Kwaye, ndisebenza neKomiti yeSuper Bowl ka-2012, ndiphuhlisa Plugin WordPress kubhaliso oluzenzekelayo oluvela kwibhlog yeWordPress nge-ExactTarget. Imalunga ne-80% epheleleyo ngoku-ndisebenza nje ukuzama ukwenza i-automate Cron msebenzi.
Isiqulatho seBlogware -Ukuba uChris Baggott wayesese-ExactTarget, saqala ukubona ithuba lokubhloga usetyenziso ukuze ubambe umxholo kwaye ubonelele ngokujolisa ngcono kuKhangelo lweNjini yokukhangela.
Ndikunye nonyana wam oqala e-IUPUI, andizubeka mngcipheko wokutsiba ebhodini xa uChris ebuza. Isenokuba yenye yezona mpazamo zam zinkulu. Ngomsindo omkhulu kunye nokuba nomona omncinci, kuye kwafuneka ndihlale ndibukele uChris noAli Sales bethatha iNkcazo yokuthengisa. Qaphela: Ukuthengiswa kuka-Ali nako kwaba negalelo kwiimbali zokuqala ze-ExactTarget kunye ne-ChaCha… uChaCha naye uchongiwe!
Ndinebhongo kakhulu ngokuba bendikuloo mhlangano wokuqala wangoMgqibelo we Starbucks apho siphuhlise imeko yeshishini, nangona!
Nalu udliwanondlebe lwangoko UChris uthetha ngeCompendium:
Isiqulatho senza inkxaso-mali yesibini ngoku kwaye sikhula ngokukhawuleza okukhulu. Indibaniselwano yeeNjini zokuKhangela kunye nokusebenza ngokukuko kophuhliso lwenkqubo yeenkampani zokuphumeza ukubhloga kushushu ngoku kwaye iCompendium iphambili. Ndaye ndema noChris kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndaza ndamphosa iimbono ezimbalwa ngemveliso yakhe.
UChris ube ngumcebisi kum kwaye uAli ebenguMongameli okhuthazayo… basebenzise eyam inguqulelo ye-Arhente endizakuyiqala kungekudala. Ukuba unomdla kwiCompendium, nceda unxibelelane nam ngokuthe ngqo kwaye ndinokukwazisa, “Kutheni ungasebenzisi nje [iBlogger, iWordPress, iTypepad, njl. Okanye unako bhalisela iNcwadana yeNkcazo (kodwa qiniseka ukuba undifaka kwisalathiso!) Kwaye uphumelele i-iPod Touch yasimahla.
I-Patronpath-Intengiso kunye ne-Ecommerce yoShishino lwerestyu -Okugqibela kodwa kungaphelelanga apho umqeshi wam wangoku. I-Patronpath ifumana ukukhula kwamanani aphindwe kathathu ngoku. Njengokuba iivenkile zokutyela zifuna ukufinya izipaji zazo ngenxa yokunyuka kwamaxabiso kunye nokunciphisa amanani okuphuma, ekuphela kwendlela yokukhulisa ishishini labo kukufumana ukhuphiswano olomeleleyo okanye lokuhambisa ishishini.
Uku-odola kwi-Intanethi kukhule abanye babathengi bethu ngokuthe ngqo kubomvu nakumnyama. Nangona undoqo wethu, sihlawula ingqalelo enkulu ekuqinisekiseni ukuba abathengi bethu basebenzisa ukusebenza kweinjini yokukhangela kunye nophuhliso olukhulu lwendawo. Akonelanga ukuba ube noku-odola kwi-Intanethi, kuya kufuneka ufumane uku-odolwa kwi-Intanethi- inqaku uninzi lokhuphiswano lwethu oluphosileyo.
Kwiinyanga ezi-8 ezidlulileyo sidibanise iinkqubo ze-POS ezi-4 ezahlukeneyo, umanyano olomeleleyo lwe-callcenter, sihlengahlengise ujongano lwethu ukunciphisa amaxabiso okulahla kunye nokuphumeza incwadana ye-imeyile yesizwe yelinye lamaqabane ethu (akhankanywe apha ngasentla kumiliselo lweshishini lethu le-ExactTarget). Komnye umboniso wemisipha yethu, ikhonkco elikhulu lacela into kwinkqubo yethu esiyiphumezileyo kwimpelaveki enye. Inqaku elifanayo lithathe ukhuphiswano iinyanga ukuphuhlisa. Sinokuninzi ngakumbi kuphuhliso ngoku kwaye sihamba singena ku-2008 ngemigqomo evuthayo!
I-Patronpath ikhula ngenkani kwaye ndityhala ngamandla ndisebenzisa i-automation kwaye (kungekudala iza kuba) ndisebenzisa imeko yobugcisa obugqityiweyo eBluelock ukuqhubeka. Sineqabane lokuphuhlisa i-ace eliphumeze ezinye zeenkampani ezinkulu ze-ecommerce emhlabeni (kumazwe aphesheya) kwaye ndiqinisekile ukuba ngo-2009, siza kuba yinto ephambili kolu shishino. Inyani yile yokuba siyazi ukuba intengiso isebenza njani, isebenza njani i-ecommerce, kunye nendawo zokutyela zisebenza- kwaye ukhuphiswano alusebenzi.
Kutshanje songeze uMarty Bird kumxube. Ndicinga ukuba uMarty ukhuphe kum iipesenti ezingama-60 zomthwalo wam kumhla awayengena ngawo emnyango kwaye kube yinto eyonwabisayo ukusebenza naye. Ukuqhuba kwakhe ngokuqhubayo kophuculo kunye nesicwangciso kanye yile nto siyifunayo kweli nqanaba lasePatronpath!
Qaphela: Ungayihoyi Indawo yokuphumla indawo-sinento entsha ezayo kule nyanga!
Kuya kufuneka ndongeze ukuba ayindim kuphela konxibelelwano phakathi kwezi nkampani zintathu. Uya kuqaphela ukuba inkampani nganye inayo Uphawu olukhethekileyo- enkosi kuKristian Andersen kunye neqela. UKristian ungumfana omangalisayo kwaye uqhuba inkampani emnandi ekwaziyo ukwenza ngaphandle kwayo nayiphi na enye iarhente okanye iingcebiso endakha ndasebenza nazo. UKristian unceda iinkampani ezincinci ukuba zibe nkulu, kwaye uqokelele iqela elimangalisayo apha ekuhlaleni ukuze lenze. Ungumhlobo olungileyo ngokunjalo.
tags: Ukuthengisaumbutho wentengisoIntengiso ye-facebooklas vegasmilonkomfa kwi intanethiuphandozigqiboindiana encinciukuqala kwevekiabavelisiumsebenzi
Iingxelo zeZack Legend kwiBhlogIN